Lovers ukuba ube khona amasu zokubukela bendabuko abakhiqizi yesimanje design enze kube nokwenzeka ukuba ujabulele emkhathini we ifilimu, ngaphandle kokushiya ekhaya. On the Ukuqhathanisa imiphumela yokukhuluma ingahambi, kodwa, njengoba okuhlangenwe nakho abasebenzisi, idivayisi compact futhi sikwazi ukunikeza kwalibaleka. Nokho, balindele umphumela omuhle ovela ekhaya cinema show kungenzeka kuphela uma ukusetshenziswa imishini eliphezulu. Abakhiqizi azikuncishi umthengi ukukhetha, ukunikela ezintsha zobuchwepheshe. imphawu letibalulekile kubukezwa ekhaya yaseshashalazini namaphrojektha ukusiza ukwenza isinqumo esifanele lapho uthenga.
Izici models ekhaya yaseshashalazini
Ekuqaleni namaphrojektha abangu yenzelwe ukusetshenziswa amakamelo ezinkulu, ezifana amahholo, izikole kanye nezinye izikhungo. Kuze kube namuhla, ukuqokwa uqhubekela ebhekiswe imodeli yentuthuko, futhi esikisela division of sphere ukusetshenziswa. Ngakho kukhona amadivayisi ukuze isetshenziswe izingqungquthela yebhizinisi, ukuqeqeshwa izinqubo, nokunye. D. Isici esikhethekile salezi onobuhle is ikhono ukusebenza ngaphansi sokukhanya okwenziwe umuntu. Ngakwelinye ihlangothi, amadivayisi ukusetshenziswa ekhaya zenzelwe ukubukela amabhayisikobho uma ukukhanya sivaliwe. Ngokwezinga elithile, lokhu ehilelekile kusiza imisebenzi umkhiqizi, ekukhiqizeni ekhaya wokudlala. Indlela ukukhetha model? Hlangana nokhunye main, kuyafaneleka izindlela uxhumano, izimfanelo ukukhanya, ukugxila nezinye izilungiselelo umshini, ukucacisa ukusebenza yayo kanye nokusebenza.
Ngokuvamile, wokudlala is hhayi ifakwe phansi nokucindezelwa ngezindlela zokuthi "Ukufundwa" ulwazi kanye yezinkampani ngqo. Lokhu okuhlukanisa lezi amadivaysi kusuka VCR ezivamile futhi DVD-abadlali. Ngesikhathi esifanayo njengoba umthombo kungaba PC, laptop, umakhalekhukhwini kanye okufanayo DVD-player. Into esemqoka - ukuhlinzeka lwenethiwekhi. onobuhle Iningi esetshenziswa nezixhumi for isignali digital Nokho, Isimanga siwukuthi, kukhona iziteshi analogo. Lezi zingozi zihlanganisa ama okokufaka esiyinhlanganisela, ifomethi Timeless S-Isiqophi, BNC futhi VGA. Kodwa ngokuvamile i-zanamuhla interface digital HDMI, DVI futhi DispalyPort. Njengoba nokubuyekezwa, ekhaya yaseshashalazini wokudlala ne-HDMI inikeza arcade "isithombe". Ngaphezu kwalokho, imishini yesimanje kalula uxhumana nezimbobo olunjalo, ngaphandle isidingo adapters. Yiqiniso, asikwazi bayakhohlwa okokufaka analog, okungase namanje kudingeke lapho esebenza nabadlali abavela nekhulu leminyaka edlule.
Yini okufanele ibe ukukhanya?
Lena ngenye yezindlela ezibaluleke kakhulu, kodwa ngesikhathi esifanayo ezicashile ukuze ongelutho khetha Izinketho. Iqiniso lokuthi lesi sici aluboniswa phezu kophawu, njengoba ithonywe kakhulu izici engaqondile ezenzeka inqubo kokubuka le filimu. Labo okungenani ukuthenga, ungakwazi unake ukubaluleka yokucucuza elikhanyayo, ulinganiswa lumens (LM) futhi inquma amandla okukhanya. Asinakusho ukuthi kuncike ukukhanya, kodwa okukhipha ukukhanya kungathinta ibhalansi ikumodi umbala. Ngakho-ke, i-choice wokudlala ekhaya yaseshashalazini ekukhazimuleni kumele kwenziwe nge amagugu lumens. Ngokwesibonelo, uma diagonal 130 amayintshi, ungakwazi ngokuphepha thatha inketho 1500 lumens. Lokhu kuyoba okwanele ukubukela ibhayisikobho ebumnyameni. Ukuze ifomethi-80 intshi unikeze inketho 600 LM. Kubalulekile ukukhumbula ukuthi ukugqama ngokweqile, futhi, akuyona plus, ngakho "zigciniwe" ukugcina inani layo akwenzi mqondo. Nakuba, uma amaseshini kuhlelwa nge izibani zikhanya, thina kufanele babale ukusebenza kule 3-4 ayizinkulungwane. LM. Amanani enjalo, amagama ajwayele ukusetshenziswa ehhovisi onobuhle namaphrojektha.
Ezibekiweko le ndlela nayo ecacisiwe. Empeleni, kwezinye izimo kunzima ukunquma, futhi ngokuya ukukhanyisa nekuphikisana akuphazamisi izinga, njengoba beshaya aphume nalo ngokwemvelo. Nokho, ngezinye izikhathi ungase ukwazi ukuhlangabezana amagugu ethile encazelweni imodeli. Ngokwesibonelo, ekhaya cinema namaphrojektha BenQ ngokuvamile aqukethe izici ratio 1000: 1. Kodwa lokhu akusho ukuthi umsebenzisi niyithole kwenqwaba futhi enemininingwane "isithombe".
Into kuphela ukuthi kungenziwa esikalini umsebenzisi ungenalwazi lokhu kulungiselelwa, kuba phambi iris auto. Empeleni, lesi sici kuqinisekisa isiqondiso kahle ibhalansi ukugqama. In practice, lokhu kuphumela okhulisa noma ukucindezelwa of nhlobonhlobo colors ngenhloso yokuhumusha umbala kangcono. Ngeshwa, le ndlela isethwe kuphela "ukucutshungulwa" izigcawu amnyama lapho azikho umbala izinto te. inqubo okunjalo kwezinkolo kubizwa ngokuthi ashukumisayo Ngokuphambene ukulungiswa. Ngokungafani oqondile Ngokuphambene amagugu, khona lesi sici ngempela azinake. Njengoba nokubuyekezwa, ekhaya yaseshashalazini wokudlala nge-Auto Iris ubhekana abangababi bemisebenzi yaso ngokungabi bikho ukukhanya.
Endabeni isinqumo zonke ngokusobala. Ayanda kuba, enemininingwane kakhudlwana futhi kangcono jikelele isithombe kuyoba. Nokho, kusuke kukufanelekele isiqala sizodingida izinkinga okumele ixazululwe ngu wokudlala njengoba omunye format kufanelekile kwezinye izimo futhi ayisasebenzi kwabanye. Ngokwesibonelo, ama-movie e-HD Okugcwele azodinga imodeli shoka lokhu ifomethi 1920 × 1080. Uma izicelo ezibalulekile izinga cha, ungagcina ngokungenisa onobuhle nge WXGA format - kulesi simo likhuluma isinqumo 1280 × 800. Kodwa namaphrojektha kangcono ekhaya yaseshashalazini usenayo Inokucaca - ngokwesibonelo, buya format ethandwa kakhudlwana 4K. Ukulungiswa elikhulu elivunyelwe yi lo mshini 4096 × 2160. Lokhu okuqukethwe kuka-DVD player kuyoba format ngokwanele futhi SVGA, okuyinto okuhambisa isithombe nge 800 × 600 isixazululo. Phela, lokhu ifomethi engcono uma uhlela ukusebenzisa idivayisi okuzokwethulwa.
Ezicashile ukukhethwa focus
wokudlala ngamunye kuhlanganisa isici ezifana ratio lelivakalako. Lokhu ipharamitha, elisho isilinganiso ububanzi kwesikrini futhi ibanga kuwo wokudlala. Okuphezulu lelivakalako ube imodeli eside kugxiliswe kwenye indawo. Ngokwesibonelo, lapho 2: isithombe 1 unikezwa imitha 2--wide, okufaneleyo ukubheka ibanga 4 amamitha. Ngokulandelana, kufanele kuhlaziywe ngokumelene kungenzeka isikhala elikhulu kwelivi isixazululo. Kodwa ngisho nangosizo izindonga eside akukhona njalo kuyancomeka ukuthenga imodeli eside kugxiliswe kwenye indawo. Abanaso ikhwalithi yesithombe - okungenani uma ukhuluma nayo ngokuzibulala libuyekeza. ekhaya yaseshashalazini wokudlala kungaba yinto yesikhashana nokujikijela. Ikakhulukazi, abanye abakhiqizi ubheke leli qembu amadivayisi format 0.55: 1. Kodwa akukho amazinga ecacile, ngakho lapha kungenzeka ukufaka futhi ubuhlobo 1.5: 1. By the way, kukhethwa iDemo-nokujikijela onobuhle akuzona njalo ngenxa yokuntuleka isikhala esanele egumbini. Ngokwesibonelo, yokucucuza elikhanyayo ayivaliwe, ngezinye izikhathi atholwe ultrakorotkofokusnye namaphrojektha ukuthi zingafakwa eduze kwesikrini at ibanga 15-20 cm.
Wave ukuthandwa 3D-ubuchwepheshe sika awuzibe inqubo design. Kukhona nezakhiwo eziningana ezahlukene, okuyinto bunikezwa umphumela pair stereo. Ngokwesibonelo, abakhiqizi basebenzisa ukucushwa "ohlangothini-by-side" futhi "phezulu-phansi". Uma uhlose ukuba asebenze ne Blu-ray ngefomethi ngakuthathu, kufanele kuhlinzekwe futhi khona yocezuningi esibonakalayo iyunithi, ngenguqulo ubuncane isixhumi le njongo - 1.4. Modern 3D HD-namaphrojektha futhi zihlanganisa ukusetshenziswa Izibuko ezikhethekile. Kodwa lesi akusona accessory ye elivamile bezibona izithombe ngakuthathu amadivayisi isakhiwa ngesisekelo nokwehlukana izihlungi. Lihambisana 3D-wokudlala, lezi izibuko akuzona ezishibhile, kodwa umphumela ezibukwayo is kakhulu sithuthukiswe sibonga kubo.
Umklamo nobukhulu balezi wokudlala
Mhlawumbe lena yiyona ndlela kuyindlela elula, lapho wonke umuntu angathembela owuthandayo, naphezu imininingwane yezobuchwepheshe kanye nesakhiwo. Mangisho ukuthi amadivayisi ekhaya ube imiklamo eyinkimbinkimbi kunazo futhi sibukeka kahle. Zikhona ongakhetha abobunjwa njalo weJiyomethri, eziningi kumadivayisi nge hulls okuchachambile - into esemqoka ukuthi wokudlala kwakuvumelana wezangaphakathi. I nemikhawuko kuphela kulokhu kungase kube ngenxa ubukhulu. Njengoba nokubuyekezwa, ekhaya yaseshashalazini wokudlala ne Ubukhulu encane kudinga indlela obucayi ukusingatha. Kodwa zikhona yokuntula esobala onobuhle emikhulu - amadivaysi ezinjalo ngeke ukuthenga uma uhlela ukuthatha nedivaysi kuhambo njalo.
Uphenyo BenQ onobuhle
Model wale nkampani njalo kufakwe nezilinganiso namaphrojektha engcono. Lokhu kunomthelela ukusebenza kwabo, kanye nokwethulwa izixazululo ezintsha zobuchwepheshe. Amalungu uqaphele ezinhle ukugqama, ikhono ukusebenza kuzo zonke izinhlobo zamafayela banamuhla ngokunenzuzo, kuhlanganise HD Full. Futhi e umkhiqizi umugqa ungathola amafoni ezinhle ukuthi ukusekela isithombe ezintathu-ntathu. Kodwa kukhona nemibi, okuyinto abe namaphrojektha ikhaya cinema BenQ cishe zonke izingxenye. Isibonelo, abasebenzisi ngokuvamile akhononde umsindo futhi ongaphakeme umsindo atihambi todvwa. Noma kunjalo, uhlelo izici anhlobonhlobo ongakhetha ngezimiso ezahlukene ukusebenza, ngakho wokudlala oluhle kusukela BenQ uzothola ubani.
Uphenyo Epson onobuhle
Phakathi Ongoti ingxenye Epson womkhiqizo njengoba trendsetter nomkhiqizi amadivayisi zobuchwepheshe ezaziwayo. Enye into ukuthi umthengi has ukubhekana amamodeli we emazingeni ehlukene, engewona nokho zinzuzo eziyingqayizivele, kodwa futhi yokuntula. Uma sikhuluma ngezinto ezakhayo, wokudlala ekhaya yaseshashalazini Epson cishe zonke izinguqulo inikeza eliphezulu isithombe. Abanikazi ukuyichazela njengoba namanzi futhi ecebile. By the way, ngokuya imikhiqizo Ngokuphambene lokhu brand kubhekwa ukhetho best.
Noma kunjalo zonke izinzuzo isithombe futhi lonakaliswe umsindo abampofu. Kwezinye onobuhle, operation umsindo zedivayisi - isibonelo, umsindo ukwahlukanisa 30 dB izenze wazizwa ezingasehlela akuyona indlela engcono. Ngaphezu kwalokho, kukhona umonakalo omkhulu Epson onobuhle uzhu ingxenye maphakathi - kuze kube ama-ruble ayizigidi 70-80 .. Nokho, kukhona ongaphakeme izindleko namaphrojektha ekhaya yaseshashalazini, kabani amanani ziyahlukahluka phakathi eziyinkulungwane 20-30. Nokho, amadivayisi njenge ayivezi zonke izinzuzo kwezobuchwepheshe apharathasi ukubukela amabhayisikobho.
Izibuyekezo ze-Sony onobuhle
Imikhiqizo yalesi brand kuthiwa uphinde wagxeka ngokuba ezibizayo, kodwa kulokhu kuba kwakufaneleka ngokugcwele. Lokho Sony Onjiniyela manje zigcwalisa lesi siprofetho ngokunikela aphakeme esibanzi isixazululo. Abanikazi bathi isithombe ecacile, ukukhanya kanye kokuqhathanisa ukujula. Lo mphumela inikeza namaphrojektha ekhaya yaseshashalazini, kabani amanani idlule ayizinkulungwane 200. Hlikihla. Amalungu yaleli su ukugcizelela ukuthi cishe elingenalo nemiphumela ethile engathandeki, okuyinto kuyagcinwa emncintiswaneni. Okungukuthi, abangabantwana projection ungenzi umsindo, ukuhlinzeka umsindo wekhwalithi ephezulu, futhi konke lokhu - ngokumelene isizinda isithombe lihle.
Lapho behlangana izici ezicashile wokudlala yokuzikhethela, abaningi bangase bazibuze: Ingabe hhayi ke kulula ukuthenga screen TV enkulu? Zonke kakhulu intengo kokubili ezahlukeneyo kukhona cishe ngendlela efanayo. Kodwa konke kuncike esikrinini esikhulu - e intshi ukuqhathanisa akuyona esivuna i-TV, futhi lokhu kuyinto inzuzo enkulu e inqubo kokubuka le filimu. Ingasaphathwa injabulo ihlinzeka 3D-namaphrojektha ekhaya yaseshashalazini format esibanzi. Nokho, kulesi simo, igebe intengo ngempela umxhwele. Zikhona nezinye izinzuzo namaphrojektha, kuhlanganise Ubukhulu icwecwe futhi umthwalo ubuncane umbono. Futhi uma kukhona kucatshangwa ukuya kuleli, ukuhlela umbukiso ifilimu? Yiqiniso, idivayisi compact uwina usizo. Kodwa noma kunjalo kubalulekile ukuthi uhlinzeka ngazo zonke ezicashile ukusebenza ukuthenga zakwazi ukwenza lokho okulindelwe.
Ngihlolwa ngoba umsebenzi: kungani futhi kanjani?